Hormuud News Friday, April 27th, 2018 | 08:34
[Monday, April 9th, 18] :: Lacagtii lagu qabtay garoonka Muqdisho oo la dhigay baanka dhexe
Muqdisho (RH) Hey’addaha ammaanka ayaa baaraya halka laga keenay loona waday lacag malaayiin dollar ah oo shaley lagu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Lacagtan oo la sheegay in ay gaareyso 9.6 milyan oo dollar, waxaana ay ku jirtay saddex boorso taasoo laga soo dajiyey diyaarad gaar ah oo laga lee yahay dalka Imaaraadka Carabta.
Lacagta ayaa la sheegay in loo sidday safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya.
Haddaba, lacagta ayaa la dhigay bagiga Soomaaliya, halkaasoo ay hadda taallo.waxaana sidoo kale la dhigay ciidamo dheeraad ah oo katirsan dowladda federaalka si ay ula socdaan dhaq-dhaqaaqa halka lacagta la dhigay.
Diyaaraddii yareed ee Imaaraatka lacagta ka keentay ayaa Salaadii Maqrib kaddib la fasaxay, waxayna mas’uuliyiinta safaaradda Imaaraatka ee Muqdisho la sheegayaa in ay ku doodayaan in lacagtaan ay ugu talagaleen ciidamada ay tababbaraan iyo adeegyada safaaradda.
Wararka Qaar ayaa sheegaya in lacagaha qaar loo waday deegaannada Puntland oo ay ku sugan yihiin ciidamada ay tababbaraan saraakiil iyo quburo Imaaraatka Carabta u dhashay.
Dowladda Imaaraatka Carabka illaa hadda kama hadlin lacagtaan lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
Xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa hoos u dhacay tan iyo bishii June sannadkii horre, xilligaas oo dowladda fedaraalka Soomaaliya ay dhex dhexaad ka noqotay xiisaddii ka aloosneed waddamada Khaliijka sida Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta oo xiriirka u jaray dalka Qadar.
Soomaaliya ayaa dhex dhexaad ka noqotay xiisadda waddamada Khaliijka.
Bishii la soo dhaafay, dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in ciidamo u tababbari doonto Somaliland, sidoo kale Imaaraadka iyo Somaliland waxa ay kala saxiixdeen heshiis 30 sanno shirkadda DP World ee laga lee yahay dalka Imaaraadka loogu wareejinayo dekedda magaalada Berbera, arrintaas waxaa ka soo horjeesatay dolwadda Soomaaliya oo heshiiskaas sharci darro ku tilmaamtay.